ओली–नेपालको छलफल सकियो, के भयो निर्णय ? — Motivatenews.Com
ओली–नेपालको छलफल सकियो, के भयो निर्णय ?
काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच टकराव बढिरहेका वेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच बालुवाटारमा छुट्टै छलफल भएको हो ।
उनीहरुको छलफल पश्चात ओली र नेपाल समूहका नेताहरुबीच बैठक सुरु भएको छ । नेपाल बालुवाटाबाट बाहिरिएपछि दिउँसो दुवै पक्षका नेताहरूबीच नेपाप निवास कोटेश्वरमा छलफल सुरु भएको छ ।
स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तका अनुसार आन्तरिक विषयमा छलफल हुन लागेको हो । ‘आन्तरिक विषयमै केही छलफल गर्ने कुरा भएको हो,’ पन्तको भनाई छ ।
ओलीका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तथा नेपालका तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल र रघुजी पन्त छलफलमा सहभागी छन् ।
जसअनुसार ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक पद रोजेर नेपाललाई छाड्नुपर्ने, दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूलाई हटाएर अवसरबाट वञ्चित नेताहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्नेलगायतका सुझाब दिएका छन् । यसमा ओली पनि सहमत नजिक रहेको नेपाल निकट नेतको भनाई छ ।